Qasabadaha toosan, daadi Maydho, daadi Floor, Musqusha Mirror Golaha Wasiirada - Fenghua
360 ° caaga ugu intifaacaan
kuraasta qubeyska Wareejinta
SHAQAYNTA TAN 1998
Ningbo Fenghua Aootan sanitary Ware Co. Ltd waa takhasusay soo saara mareenada qubeyska iyo accessories Roob leh waayo-aragnimo ka badan 8 sano. Waxaan aaminsan nahay in aan mid ka mid ah oo tayo sare leh ugu, si fiican u dhisay oo kala duwan doorashada ee accessories musqusha dhammaan dunida Aootan. Waa doorasho fiican ee guryaha decoration casri ah, hoteelo iyo dhismayaal ganacsi.
Waxaan nahay sharaf iyo soo dhaweyn in ay soo saaraan alaabta adeegga OEM / ODM leh tayo sare iyo qiimaha tartan rasmi ah la gaarsiinta deg deg ah. Aootan waa diyaar u ah inay ka ciyaaraan door waxtar leh in aad ganacsi. Nala soo xiriir si aad u ogaato sida ay uga dhigayeen si aan u raali kaa caawin kara inaad gaarto natiijada ugu wanaagsan ee tayada iyo faa'iidada.
Wall Qasabadaha W2
Wall Qasabadaha W1
S1-02 Qasabadaha Square
S4-03 Qasabadaha Square
Vertical Outlet V-17
Qasabadaha Corner L-01
Waxaan Ma Kalsoonyahay
Cinwaankaaga: Park No.21 Shewang Ind, Chunhu Town, Fenghua Ningbo Shiinaha.